Tech kambani Honeywell neChishanu yakaunza yavo inotevera-chizvarwa huwandu hwekomputa, iyo System Model H1. Chizvarwa cheH1 chemakomputa, icho chinoshandisa tekinoroji yeiyi yakateyiwa, yakarongedzwa zvine hungwaru kuti ikurumidze kusimudzira muhupenyu hwayo hwese, yakadaro kambani.
Honeywell akati komputa pakutanga inopa gumi zvakazara zvakabatana zvakabatana, yakawonekwa vhoriyamu vhoriyamu ye10, uye zvakasarudzika maficha senge epakati-wedunhu kuyerwa uye qubit kushandiswazve.
Quantum vhoriyamu ndeye metric yeiyo yakazara compute simba yequantum komputa. Sekureva kweshumo iri muTechCrunch, iyo H1 huwandu hwehuwandu hwakakwira kupfuura hwakaenzana hwakaedzwa neBMM
Asi iri kumashure kwazvo kwezvakateyiwa-ion quantum komputa yekutanga IonQ yakataurwa pakutanga kwemwedzi uno yaikwanisa kuzadzisa ne32 qubits.
Honeywell akati H1 inosvikika zvakananga kumabhizinesi kuburikidza neyakagadziriswa application programming interface (API), pamwe nekuMicrosoft Azure Quantum, uye padivi pevashandi vechiteshi vanosanganisira Zapata Computing uye Cambridge Quantum Computing.
Kuwana H1 kunogona kuwanikwa kuburikidza nekunyorera.
“Honeywell's hasha yequotum computing mugwagwa unoratidza kuzvipira kwedu mukuwana chiyero chebhizimusi chebhizimusi redu rehuwandu. Yedu yekutenga-yakavakirwa modhi inopa vebhizinesi vatengi mukana weHoneywell's advanced system inowanika, "Tony Uttley, Mutungamiri weHoneywell Quantum Solutions, vakadaro muchitaurwa.
"Nzira yakasarudzika yaHoneywell inoita kuti tikwanise 'kusimudzira' chizvarwa cheH1 nemaitiro kuburikidza nekuwedzera huwandu hwequbit, kutendeka kwepamusoro uye nekugadziriswa kwakasiyana."
Akatungamirwa muCharlotte, North Carolina kuUS, Honeywell anoshandisa vanhu vangangosvika zviuru gumi nezvitatu munzvimbo dzinosvika makumi maviri kusanganisira Bengaluru.
Iyo Vertiv Edge Lithium-Ion 1500 VA UPS Ongororo: Impeccable Simba, Inoisa Mutengo
Bhatiri ramangwana, rinouya munguva pfupi: Kura mumasekondi, mwedzi yekupedzisira uye simba pamusoro pemhepo
3 Nzira dzeKushandisa Android Runhare Ine Yakaputswa Vhoriyamu Mabhatani
Anokwikwidza manhamba emakomputa anoenda kumusoro kumusoro kwekutanga